Yakachipa 808nm Diode Laser Bvudzi Removal Machine Vanopa uye Fekitori | VTEX BOKA
808nm Diode Laser Bvudzi Kubvisa Machine
1,100% Germany yakapinza Laser Stacks
2, Chairo safire Crystal, yakanakisa kuitisa conduction
3. 12 * 20mm yakakura saizi saizi, ine "IN-Motion" nzira yekurapa, inomhanyisa kurapa kumhanya
4. 808nm katatu wavelength. achevinq mhedzisiro yemhando dzese dzebvudzi uye ese marudzi eganda
Diode laser yekubvisa bvudzi tekinoroji kunoenderana nesarudzo inosarudza yechiedza uye kupisa. Iyo laser inopfuura nepakati peganda kuti isvike pamudzi webvudzi follicle.Chiedza chinogona kutorwa uye kuchinjirwa kuita kupisa kwakakuvadzwa bvudzi follicle tishu, kuitira kuti kurasikirwa kwebvudzi kuve patsva pasina kukuvara kwakatenderedza nyama. Iyo yakachengeteka kwazvo, inoshanda tekinoroji yekubvisa bvudzi zvachose izvozvi.
Kubatsira kweDiode Laser Bvudzi Kubvisa Muchina
10 * 20mm yakakura saizi saizi uye 10 HZ kudzokorora chiyero, uye iyo "IN-Motion" yakangwara modhi kuunza iyo inokurumidza kumhanya kurapa kusvika 10shots pasekondi, izvo zvinochengetedza yakawanda nguva yekuita kurapwa.
a. 2000W yakasimba magetsi, inoita yakasimba simba kuburitsa
b. Germany yakapinza Laser Stacks, gumi masara uye 800W kuburitsa. (Pfuti dzese, simba rakadzikama)
3. Yakachengeteka uye isingarwadze
Tiri kushandisa TEC kutonhodza sisitimu yematangi emvura uye TEC yesafiri mune ruoko chidimbu, kuti ugone kuwana makumi maviri nemana maawa uchishanda nemuchina, TEC kutonhora sisitimu yeSafiri ruoko 0-5 ° C, izvo zvinoita kuti kurapwa igare yakagadzikana.
4. Nyore kushandisa interface
Auto akangwara modhi dhizaini kune vashandisi, Isu takagadzira akasiyana presets ezvikamu zvakasiyana zvemuviri, bonde uye ganda mhando, kunyangwe kune vashandisi vatsva, ivo vanogona kushandisa muchina zviri nyore.
10.4 ”24 ruvara kubata LCD chidzitiro
1-120J / cm2 chinjika
Thermal yemagetsi kutonhora + mvura kutonhora + Mhepo kutonhora + nesafiri kuonana kutonhora kwemalaser musoro
AC 220V / 50Hz kana AC 110V / 60Hz
Pashure: 808nm Diode Laser Bvudzi Rokubvisa Machine - fekitori
Zvadaro: Picosecond Laser Tattoo Kubvisa Muchina
808 Diode Laser Bvudzi Kubvisa Muchina
Diode Bvudzi Kubvisa Laser
Ipl Opt Laser Bvudzi Kubvisa Machine Permanent Ha ...